DAWLADDA ITOOBIYA OO WAR CUSUB KA SOO SAARTAY CIIDANKA AMISON EE KU SUGAN DALKA SOOMAALIYA | Maalmahanews
Maalimahanews(Adis-ababa):- Dawladda Itoobiya ayaa doonaysa in aan ciidamada Midawga Afrika ee AMISOM laga saarin Soomaaliya “Itoobiya waxay doonaysa in ciidamada nabad ilaalinta ee Afrika ee tirada badan joogaan Soomaaliya,” Sidaas ayuu yidhi afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya Khamiista maanta.
“ Arrinta ah in AMISOM(hawlgalka Midawga Afrika ee Soomaaliya) laga saaro Soomaaliya Itoobiya waxay ka taaggan tahay mawqif ah waa in Xooggaga Afrika joogaan Soomaaliya inta ay ka imanayso in kooxda Alshabaab awooddeeda aad loo wiiqo,” sidaas ayuu yidhi afhayeen Meles Alem.
Ciidamada nabad ilaalinta ee Afrika ayaa sanadkii 2007 la geeyay dalka Soomaaliya si ay uga hor tagaan halista Alshabaab waxaana muddooyinkii u dambeeyay la waday in la dhimo ciidamada Afrikaanka ah si masuuliyadda loogu wareejiyo ciidamada Militariga ah ee Soomaaliya.
Hase ahaatee hadalka dawladda Itoobiya oo qayb ka ah ciidamada ayaa u muuqda in dalalka qaarkood fayga hayaan sidii ciidamadu u joogi lahaayeen waxaanu sheegay in aanay ciidamadu baxay ilaa loo arko in Alshabaab aanay wax halis ah lahayn.
Source:Ethiopia ‘wants’ AU mission to stay in Somalia
Maalimahanews – Hargeysa Desk